कोरियाका चर्चित नायिकाहरुले कति कमाउँछन त? थाहा पाउँदा सबै पर्छन च’कित – Eps Sathi
December 2, 2021 1234
अहिले दक्षिण कोरियाली ड्रामाहरु विश्वभनर प्रख्यात रहेका छन। कोरियाली संस्कृति विश्वभर फै’लिएसँगै यसका कालाकारहरुको तलब पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। कोरियाका नायक नायिकाहरुले कति कमाउलान त? धेरैलाई यो बिषयमा जान्ने इच्छा हुन सक्दछ। अहिले कोरियाका प्रख्यात नायिकाहरुले ड्रामामा अभिनय गरेको प्रति एपिसोडको २ सय मिलियन वन अर्थात करिब १ लाख ७० हजार डलर लिने गरेको पाइएको छ।
कोरियाएको एक प्र’ख्यात पत्रिका हानकुक इल्बोका अनुसार कोरियाका प्र’ख्यात नायिकाहरु सोङ हे क्यो र जुन जि ह्युन जसका ड्रामा हरु अहिले प्रसारण भइरहेका छन उनिहरुले प्रति एपिसोट ड्रामा मा अभिनय गरेको २ सय मिलियन वन लिने गरेका छन। सोङले अहिले प्रसारण भइरहेको एसबिएसको मेलोड्रामा ‘नाउ वि आर ब्रे’कि’ङ अप’ मा अभिनय गरेकी छिन भने जुन ले टिभि एन को मिस्ट्रि सिरिज ‘जिरीसन’ मा अभिनय गरेकी छिन।
कोरियामा धेरैजस्तो अवस्थामा नायक तथा नायिकाको तलबका बारेमा खासै वाहिर ल्याइदैन। श्रोतका अनुसार सङले टिभिएनको ‘इ’न का’उन्टर’ का लागि प्रति एपिसोड १० करोड वन लिने गरेकी छन। यो कार्यक्रम सन २०१८ मा प्रसारण भएको थियो। उनि अहिले धेरैले रुचाएकी नायिका भएकी छिन। उनको अन्तराष्ट्रिय प्रसंसकहरु पनि धेरै नै रहेका छन। विश्वमै च’र्चित बनेको ‘डिसेन्डेन्टस अफ द सन’ नामक ड्रामाका कारण उनको चर्चा चुलिएको थियो।
जुन पनि एसबिएसको मेगा हिट रोमान्टिक कमेडी ‘माइ लभ फ्रम द स्टार’ मा मुख्य नायिकाका रुपमा अधिनय गर्दा प्रति एपिसोड १० करोड वन लिएको बुझिएको छ। यो ड्रामा सन २०१३ मा प्रसारण भएको थियो। उनि धेरै समय सम्म विभिन्न टिभी कमर्सियलहरुमा प्रमुख पात्रका रुपमा देखिएकि थिइन। हानकुक इल्बोका अनुसार कोरियामा नायक र नायिकाले पाउने तलबमा धेरै अन्तर रहेको पाइन्छ। केहि नायिकाहरुले मात्र प्रतिएपिसोड १० करोड वन तलब पाउने गरेका छन तर धेरैजसो नायकहरुले यो तलब सजिलै पाएको देखिन्छ।
Prevहाइपर फण्ड डुबेको हल्ला चल्दै, खासमा भएको के हो? जानौं
Nextकोरियाको नजर नयाँ भन्दा पुरानै कामदारमा, नयाँ भाषा परीक्षा यो महिनामा हुन सक्ने
महिला पुरुष सबैका लागि एउटै ट्वाइलेट बनाउँदै सउलको एक विश्वविध्यालय
कोरियामा पूर्व राष्ट्रपतिलाई २० बर्ष जेल